Waa tan ugu weyn ee MCU Wajiga 4 ilaa iyo hadda, waana dhagar qalooca aynaan waligeen arag imaatinka - BGR
Wax yar ayaa laga ogyahay waxa ay Marvel ka shaqeyneyso iyada oo la xiriirta sheekadeeda Marvel Cinematic Universe. Istuudiyaha ayaa xaqiijiyay inuu ka shaqeynayo dhismaha xiga Dhamaadka ciyaarta noocee filinka ah, laakiin sannado ayay qaadan doontaa in halkaas la tago. Dhacdooyinka ka dib Rakaabka 4, waxaan ubaahanahay geesiyaal cusub oo hogaamiya kooxda, waxaana sugeynaa inaan soo helno shar-wadeyaal cusub, oo ay kujiraan kuwa waaweyn ee badali doona Thanos. Marvel wuxuu sameyn doonaa wax kasta oo macquul ah si looga fogaado in wax daadiyaan, mana fileyno inaan ogaanno faahfaahin badan oo ku saabsan filimada soo socda ee MCU Wajiga 4 iyo bandhigyada TV-ga illaa uu Marvel ka helo. In kasta oo ay taasi jirto, qalloocii ugu horreeyay ee Wejiga 4 wejigiisa ayaa laga yaabaa inuu hadda soo ifbaxay, waana sidaas tuug weyn inaad rabto inaad iska ilaaliso hada.
Marvel waxay ku jirtaa hawsha bilaabista filim ka socda Boqortooyada Midowday hadda, taas oo uun noqota tii ugu xiisaha badnayd filimka Wajiga 4 iyadoo la siinayo wax kasta oo aan ka maqalnay. Marvel ayaa horay noogu sheegay filimku inay soo bandhigi doonaan geesiyaal aynaan arkin inay soo socdaan, iyo in laba barnaamij oo TV ahi ay isku xidhayaan, oo ay ka mid yihiin Loki et WandaVision. Xanta ayaa sidoo kale sheegeysa in tani ay noqon doonto markii ugu horeysay ee X-Ragga ay ka soo muuqdaan filim MCU ah, iyadoo Deadpool iyo Wolverine ay labaduba u maleynayaan inay helayaan sawirro. Hadaadan wali qiyaasin, SES Dr. Qadiimiga ah ee waallida badan.
Scott Derrickson waxaa laga yaabaa inuusan hogaamin Dhakhtar yaab leh 2, laakiin taasi micnaheedu maahan in wax soo saarku joogsan doono ama in filimku uusan diyaar u ahayn waqtigii la bilaabay May 7, 2021.
sida laga soo xigtay Arinta ka dambeysaJilaaga Marvel ayaa socda qeybta labaad, oo loogu tala galay in duubista laga bilaabo UK xagaagan. Maxaa xiiso leh Arinta ka dambeysa Warbixintu waa inay runti soo bandhigto qoraal qeexan oo muujinaya Yaab leh 2:
Dhacdooyinka ka dib Rakaabka: Dhammaadka ciyaarta, Dr. Stephen Strange wuxuu sii wadaa daraasadiisa ku aadan waqtiga dhagaxa. Laakiin saaxiibkii hore ee cadawga ayaa jeedsaday qorshihiisii ​​wuxuuna ku sababeeyaa qalad aan laga hadli karin.
Taasi waa macluumaad badan halkan, maaddaama soo-jeedinta aan rasmiga ahayn ay bixiso laba faahfaahin oo muhiim ah oo ku saabsan mustaqbalka MCU. Marka ugu horeysa, Strange kuma faraxsana luminta Waqtiga Dhagaxa - xusuusin deg deg ah oo ah in Thanos-ka ku jira waqtigii ugu weynaa ee MCU uu burburiyey Dhagxaanta, oo uu marka hore u rogay siigo Dhamaadka ciyaartaiyo Dhagxaanta Infinity oo ay Avengers xadeen dib ayaa loogu soo celiyay waqtigii ay ka tirsanaayeen.
Xaqiiqda ah in Strange ay baraneyso Waqtiga Dhagaxa waa faah-faahin fantastik ah oo ku saabsan mustaqbalka MCU, iyadoo loo maleynayo in qeexitaankan uu sax yahay. Miyuu qofna awoodi doonaa inuu dib u abuuro Dhagxaanta dhowaan? Faahfaahinta “saaxiibkii hore ee cadawga noqday” ayaa sidoo kale xiiso leh. Qofkani wuxuu sida muuqata ku qasbi doonaa Strange inuu "banaanka soo dhigo sharka aan la sheegi karin", taas oo mar horeba iga dhigtay inaan doonayo inaan waxbadan ogaado.
Waa kuwee saaxiibbadaa hore saaxiib? cartoon Baron Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor) ayaa laga yaabaa inuu noqdo musharrax wanaagsan. Laakiin suurtagal kale ayaa ah Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), oo la xaqiijiyay inuu ka soo muuqan doono filimka. Dhab ahaan saaxiibkii hore ee Strange's, laakiin markaa yaa garanaya sida ay waqtiga u cabiraan. Maxaa iska cad kadib Dhamaadka ciyaarta waa in Wanda ay tahay Aargudiyaha ugu awoodda badan hadda, wax uu Kevin Feige sheegay intii lagu jiray dhacdo dhowaan su'aalo iyo jawaabo ah.
Ilo ku dhow arrinta sheegay Waan daboolnay in Wanda runtii loo weecin doono dhinaca mugdiga ah, sida loo hadlo, ka dib dhacdooyinka taxanaha xiga ee Disney + WandaVision:
Gaar ahaan, waxaa naloo sheegay in waqtiga filimku bilaabmayo, Wanda ay bilaabaneyso inay waasho oo maskaxdeeda ka luntid maxaa yeelay waxa dhaca dhamaadka bandhigga aan soo sheegnay ee Disney Plus. Awooddeeda ayaa sidoo kale sii kordheysa, sidaan kor ku soo sheegnayna, waxaa saameyn ku leh Riyo-qarow. Awoodeedu waxay bilaabaan inay dalooliyaan godka dhabta ah waxayna si ba'an ugu dadaaleysaa inay soo ceshato caruurteeda, oo ay ku wayday dhamaadka WandaVision markii Habeenki uu ka dhigayo inay ogaato in xaqiiqda ay nafteeda u abuurtay aysan ahayn mid dhab ah. wuuna baabi’iyaa.
Tani waxay Wanda dhigeysaa waddo khatar ah iyada oo aan si sax ah loo arki doonin inay tahay sharrax buuxa oo ku sugan Dhakhtarka Qariibka badan ee Waallida badan, rabitaankeeda ah inay adeegsato awooddeeda halista ah si ay carruurteeda dib ugu soo celiso iyada oo ay weheliso saamaynta xun. of Nightmare wuxuu dhab ahaan cadow uga dhigi doonaa Dhakhtarka Yaabka leh, iyadoo Saaxirka Sare loo sheegay inuu isku dayo oo dib u qaabeeyo xaqiiqda waxa ay ahayd sixirkiisa oo uu joojiyo iyada iyo Riyada.
Waxaan horey u aragnay wararka la isla dhexmarayo ee ah in carruurta Wanda aragtidooda leh ay dhici karto inaysan dhab aheyn, taas oo macno sameyneysa iyadoo Himilo ay dhimatay. Haddii waxaas oo dhami run yihiin, markaa tan xigta Dhakhtar yaab leh taxanaha ayaa isu rogi kara inuu noqdo dhacdo muhiim u ah dhacdada MCU, laga yaabee inay muhiim u tahay sheekada weyn sida Dagaal Sokeeye waxay ahayd sababta oo ah waxay dejin kartaa masraxa ee iska hor imaadka weyn ee X-Men vs Avengers. Waxaa xiiso leh in la ogaado in xaaladdan oo kale ay u diyaar garoobeyso mustaqbal. Avengers on.
Isha Sawirka: Marvel Studios